युगसम्बाद साप्ताहिक - सामूहिक आवाजको खाँचो
Thursday, 04.09.2020, 01:05pm (GMT+5.5) Home Contact
सामूहिक आवाजको खाँचो
Tuesday, 10.21.2014, 10:36am (GMT+5.5)
हिमाल र सागरबीचको अन्योन्याश्रिम सम्बन्धमा आउने दरारले ठूलो विपत्ति निम्त्याउँछ । यस्तै विपत्तिको सामना नेपालले गर्नुपरेको छ त्यो पनि बेमौसममा । प्रमुख पर्यटकीय याममा विश्वप्रसिद्ध पदयात्रा मार्गमा गएको हिम पहिरोका कारण ४० जनाभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको मृत्यु हुनु नेपालको पर्यटन व्यवसायको भविष्यमाथि खतराको संकेत हो । यसको कारक भने नेपाल हुँदैहोइन । विश्व जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भएका बिकारहरूले गर्दा नेपालको हिमाल असुरक्षित भैरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण सर्वाधिक प्रभावित हुने मुलुकको प्रमुख स्थानमा रहेको प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधताको धनी नेपाल अपूर्व प्राकृतिक संकटको भूमरीमा पर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनले विश्वलाई नै आकर्षित गर्दछ । धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विविधताको बयानै गरेर सकिन्न । कतिपय प्राकृतिक कुराहरूमा आधा विश्वको प्रतिनिधित्व नेपाल एक्लैले गर्दछ भनेर विज्ञहरू बताउँछन् । विश्वमा जति प्रजातिका चरा छन्, त्यसको ३६ प्रतिशत नेपालमै रहेको बताइन्छ । अहिले यी सम्पदाहरू संकटको भूमरीमा पर्न थालेका छन् । विश्व जलवायु परिवर्तनले नेपालको मौलिक परिचय नै गुम्ने खतरा मात्र उत्पन्न भएको मात्र होइन, नेपालको सामाजिक–आर्थिक जीवन नै तहसनहस हुने अवस्थाको समेत सिर्जना हुने भय मडारिएको छ । तर हाम्रा नीति निर्माताहरूले यसमा दिनुपर्ने जति चासो दिएका छैनन् र लिनुपर्ने जति चिन्ता पनि लिएको पाइदैन ।
अर्कोतिर नेपालभित्रै प्राकृतिक स्रोत साधनको अनावश्यक र बेढङ्गी उपयोगले निम्तिनसक्ने विपत्तिको ख्यालै गरिएको छैन । राजधानी उपत्यका मात्र होइन, पहाडी जिल्लाका डाँडाकाडा भत्किने क्रममा छन् भने जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट बच्न अपनाउनुपर्ने गृहकार्यको तयारी नै भएको छैन । यसको विपरीत व्यवसायको नाममा पहाड खनेर त्यहाँबाट ढुङ्गा–माटोको विक्री भैरहेको छ । चुरे पहाडलाई ध्वस्त पार्ने गरी संचालनमा आएका गिटी–रोडा कारखानाले दिने राजश्वको तुलना त्यसबाट पर्ने पर्यावरणीय क्षतिसंग हुन सक्दैन । केही रकमको लोभमा मुलुकलाई नै तहसनहस पार्ने काम भैरहेका छन् । नीति निर्माताहरूले प्राकृतिक सन्तुलन कायम गर्नेतिर खासै ध्यान दिएका छैनन् । वनजंगल उजाड हुँदैछन् । पहाडहरू चर्किने र भत्किने खतरा औंल्याउन थालिएको छ । राजधानीकै शिवपुरी, नागार्जुन, पुल्चोकी लगायतका पहाडहरू भासिने खतरा बढेको छ । यसको एउटै कारण भनेको उपत्यकामा बढ्दै गएको अव्यवस्थित शहरीकरण हो । शहरीकरण र वस्ती विकासका नाममा सानातिना डाँडा र थुम्काहरूमा डोजर कुदाउने गरिएको छ । उर्बर भूमि मानिएको उपत्यका यतिबेला घरैघर मात्र उम्रिरहेका छन् । यहाँको हरियाली, पानीका स्रोत र सौन्दर्यका प्रतिमूर्ति वरिपरीका पहाडहरू जोखिममा परिरहेका छन् । हिजो बाबु बाजेले हामीलाई हस्तान्तरण गरेको धारा, पोखरी र स्वच्छ नदीको ठाउँमा हामीले भोलिका पुस्तालाई के हस्तान्तरण गर्दैछौं ? खोई कसैले चिन्ता र चासो देखाएको ? नदी भनेको ढल निकासको बाटो र पहाड भनेको उजाड र पहिरो गएको भीर मात्रै हामीले भावि पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने हो ?
हामी आफूले जति विकार थुपार्याैं त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी धनी र विकसित राष्ट्रहरूले सिर्जना गरिदिएको संकटको सामना गर्नु परिरहेको छ । हिमाल पग्लदैछ, पहाड उजाड हुँदैछ, तराईमा डुबान र बाढीको समस्या बढिरहेको छ । कृषि प्रणालीमा व्यापक फेरबदल आएको छ । तराईमाभन्दाा हिमालमा तापक्रम वृद्धिको दर उच्च छ । फलफूल पाक्ने समय बदलिएको छ । हिमाली क्षेत्रमा समेत लामखुट्टे देखापर्न थालेका छन् । यसको एउटै कारण जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हो । नेपालले यस विषयमा विश्व मञ्चमा दह्रो आवाज उठाउनुपर्दछ । समुद्री किनारमा रहेका र हिमाली मुलुकहरूको सामूहिक आवाजले मात्र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न र यसबाट भएको क्षतिको पूर्ति लिन सकिन्छ । यस दिशातिर कुनै पनि मुलुक एक्लैले कराएर केही हुँदैन, सामूहिक आवाज र सामूहिक योजना तथा तथ्यांक पेश गर्नुपर्दछ । विदेशीले तयार गरिदिएको प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका भरमा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट पुगेको क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउन सक्दैन ।
एकातिर विश्व तापक्रममा आएको वृद्धि, अर्कोतिर नेपालभित्रै भैरहेको प्रदूषण । यी दुईको संयोजनले नेपालको तमाम क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ । दुई दशक अघिसम्म जलवायु परिवर्तनलाई महत्व र चासो दिइने गरिएको थिएन । हाल आएर जलवायु परिवर्तनले मानव सभ्यतालाई मात्र होइन पृथ्वीको अस्तित्वलाई नै संकटमा पार्न थालेका अनेक संकेतहरू देखिएका छन् । केही मुठ्ठीभरका धनी, औद्योगिक र सम्पन्न मुलुकहरूको लापरर्वाहीका कारण यस्तो स्थितिको सिर्जना भैरहेको छ । ‘ग्लोबल वार्मिङले अब ग्लोबल वार्निङ’को रुपधारण गर्दैछ । यसको संकेतका रुपमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा आएको समुद्री आँधी, बेमौसममा नेपालका हिमालमा गएको हिमपहिरो आदि हुन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कुनै एक मुलुकमा मात्र होइन विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा एकसाथ पर्ने प्रशस्त आधार र उदाहरणहरू देखापरिरहेका छन् । यसलाई समय छँदै समाधान गर्नेतिर लागिएन भने विश्वका धनी मुलुकको धनले मानव सभ्यता बचाउन सक्दैन । सक्दो हो त अमेरिका, जापान जस्ता मुलुकले शून्य क्षति व्यहोर्नुपर्ने हो । त्यसैले भविष्यमा निम्तनसक्ने महासंकटबाट जोगिन प्रकृतिसंग खेलिएको पौठेजोरीबिरुद्ध प्रकृतिलाई नै सन्तुलन राखेर प्रकृति मैत्री काम गर्नुपर्दछ र यसका लागि सिंगो विश्वको सामूहिक प्रयास र आवाजको खाँचो छ ।